पुँजीगत खर्चको अवस्था यो वर्ष विकास खर्च रु. ४ खर्व ८ अर्ब ५९ लाखहुने लक्ष्य राखिएकोमा पुष मसान्तसम्म (छ महिनामा) त्यसको १५.३८ प्रतिशत अर्थात रु. ६२ अर्ब ७६ करोड ६७ लाखमात्रखर्च भएको कुरा बजेटको अर्...
कलंकीमा ट्रकले ९ सवारी साधनलाई दियो ठक्कर, एक जनाको मृत्यु, १० घाइते
काठमाडौं । काठमाडौंको कलंकीमा मालबाहक एउटा ट्रकले मोटरसाइकलसहित ९ वटा सवारी साधनलाई ठक्कर दिएको छ । थानकोटतिरबाट कलंकी आइरहेको ट्रकको ब्रेक फेल हुँदा सोमबार साँझ दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा परी चित...
काठमाडौं । नेपालकै पहिलो स्ट्यान्ड–अप कमेडी रियालिटी सो ‘कमेडी च्याम्पियन’ को ग्रान्ड फिनाले चैत एक गते हुने भएको छ । आजसम्म नियमित सो रहेको कार्यक्रममा बीचका केही भाग प्रतिस्पर्धी र अतिथिको प्रत्तुती...
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा यसअघि निर्माणको काम गरेको इटालियाली कम्पनी सिएमसीले भुक्तानी गर्न बाँकी सहायक ठेकेदार र आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । स्थानीय कामदारको ज्याला...
डोटी । पछिल्लो समय यहाँका गाउँपालिमा सडक खन्न भित्रिएका डोजरका कारण श्रमिकहरु विस्थापित हुन थालेका छन् । जिल्लाका स्थानीय तहले निर्माण गर्ने सडकहरु उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने भनिए पनि यहाँका गाउँगाउँ...
फेवातालमा डुङ्गा पल्टियो, २ को उद्धार, १ जना बेपत्ता
फेवातालमा सोमबार डुङ्गा पल्टिँदा एक जना बेपत्ता भएका छन् । डुङगा दुर्घटनामा काठमाडौं महानगरपालिका– १२ का २५ वर्षीय सुमित लुइँटेल बेपत्ता भएका हुन् । फेवातालमा भएको डुङ्गा दुर्घटनामा काठमाडौंकै रूपेश ...
मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदद्वारा राजीनामा
एजेन्सी । मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले पदबाट राजीनामा दिएका छन । ९४ वर्षीय प्रधानमन्त्री मोहम्मदले राजासमक्ष राजीनामा बुझाउदै नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुला गरेको बताएका छन् । सोमबार प...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कालो झण्डा देखाउने ६ जना युवाहरु पक्राउ परेका छन । आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले बर्थडेको दिनमा राजा महाराजाको जस्तो शानका साथ देशको आर्थिक हिनामिना र नेपालको...
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली समाज, बहुजाति, बहु धार्मिक, बहुसांस्कृतिक भरिएको मुलुक भएको बताएका छन । आइतबार ग्याल्बो ल्होसार दिवसको...
काठमाडौं । निरन्तर उकालो लागेको सुनको मूल्यले नयाँ इतिहास रच्न सफल भएको छ । सुनको मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा १५ सयले बढेको छ । नेपाली बजारमा आइतबार ७८ हजार ८ सय रुपैयाँ प्रतितोलामा कारोबार भएको छापाव...
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ । सोमबार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा समसामयिक सवालमा छलफल भएको ...
राष्ट्रपति ट्रम्प आजदेखि दुईदिने भारत भ्रमणमा
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आजदेखि दुईदिने भारत भ्रमणमा आउँदैछन् । भारतीय संचारमाध्यमहरूका नुसार ट्रम्पसँग मेलानीया ट्रम्प पनि भ्रमणमा सहभागी हुनेछिन् । उनले भनेका छन्, "म भारतका कराड...
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले खैरो हिरोइनसहित एक युवतीलाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले काँकडभित्ताबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ना ७ ख ५७०२ नम्बरको यात्रुबाहक ...
टोकियो । डायमण्ड प्रिन्सेस नामक एक पानी जहाजमा जापान पुगेका थप एक कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको आइतबार मृत्यु भएको छ । योसँगै कोरोना भाइरस सङ्क्रमित उक्त जहाजका तेस्रो यात्रुको मृत्य भएको छ भने आइतबारको य...
फ्रेन्च लिग वानमा पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) विजयी भएको छ । तर खेलको अन्तिम मिनेटमा नेयमारले रातो कार्ड पाएर मैदानबाट बाहिरिन बाध्य भए । पीएसजीले बोर्डक्सलाई ४–३ ले पराजित गरेको हो । घरेलु मैदानमा भ...
बुहारीसँग अनैतिक सम्बन्ध राखेको भन्दै बाबुको हत्या
रौतहट । आफ्नै बाबुको हत्या गरेको आरोपमा रौतहट प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा २५ वर्षका राजकुमार पण्डितलाई पक्राउ गरेको छ । उनले हत्या आरोप स्वीकारेका छन् । आफ्नी पत्नीसँग आपत्तिज...
बारा । प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद ज्ञवालीले राज्य र प्रहरी संगठनले सोचेजस्तो एवं आमनागरिकले खोजेजस्तो उत्कृष्ट प्रहरी सेवा प्रवाह गर्नु प्रहरी कर्मचारीको दायित्व रहेको बताएका छन । बारा, पर्सा र ...
‘मिथिला परिक्रमा’ आजदेखि शुरू
अनेकतामा एकताको विशिष्ट उदाहरण रहेको मिथिला परिक्रमा आजदेखि शुरू भएको छ । पन्ध्रदिने उक्त परिक्रमा मेला फागुन प्रतिपदामा शुरू भई पूर्णिमाका दिन सम्पन्न हुन्छ । मिथिला महात्म्यका अनुसार मिथिलापुरीको य...
काठमाडौं । निर्वतमान सूचना, प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याउन माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता भएको छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प...
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको जन्मोत्सव मनाइयो
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बालुवाटारमा जन्मोत्सव मनाइएको छ । ७० औँ वर्ष उमेर प्रवेशको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा जन्म दिन मनाइएको हो । जन्म दिन मनाउन प...